Hiran State - News: HS:-Wararkii ugu danbeyey Hiiraan
HS:-Wararkii ugu danbeyey Hiiraan
HS:- Wararkii ugu danbeeyey iyo halka uu marayo shirarkii is dabajooga ahaa ee ay xildhibanada reer Hiiraan ka wadeen magaalada Belet Weyne.
Magaalada Belet weyne oo ka baxday gacanta kooxda Shabaab dhamaadkii sanadkii tagay ayaa hada waxaa gudaheeda ka socda shirar iyo wadatashi ay yeelanayaan xildhibaanada, waxgaradka iyo waliba aqoonyahanada reer Hiiraan, iyadoona ay shirarka ugu badan ay ka socdaan xarunta degmada Belet Weyne oo saldhig u ah mudanayaasha baarlamaanka kumeel gaarka Soomaaliya.
Dadka ku dhaqan magaalada Belet Weyne ayaa aad u soo dhaweeyey sida ay mudanayaashu daacad uga yahiin iney Hiiraan noqoto goob ka cagaan colaad maadaama ay waxkasta ka bilabeen wadtashi iyo sidii ay reer Hiiraan u mideyn lahaayeen siyaasadooda iyadoo waxkasta loo marayo wado sax ah iyo wadatashi, iyadoo talada inteeda badan loodaynayo waxgaradka Hiiraan si loo helo nidaam wanaagsan oo bulshada Hiiraan wada deeqa kuna mideysan yahiin.
Sidoo kale jaaliyada reer Hiiraan ee qurbaha ayaa u muuqda kuwo si isdaba joog ah hada ugu xirmaya xildhibanda ku sugan gudaha Hiiraan maadaama ay qaarkood mudo ku jireen buuraha hadane ka qeyb qaadanayan dib u heshiisiinta iyo wada noolanshaha reer Hiiraan.
Arinta qurba joogta soo jiitatay ayaa ah ineysan mudanayaasha Hiiraan ku sugan u socon iney la wareegaan hogaanka Hiiraan amaba uu iyaga damac kaka jirto arintaas ujeedadoodu waa sidii ay reer Hiiraan u noqon lahaayeen dad is walaashada, nabad ku wadanoolaada, maamul adag dhista iyadoo la mideynayo maamulada hada jira kadibna sidaas lagu raadiyo dantii guud ee reer Hiiraan ka dhaxeyn jirtay kadibna la raadiyo dadka deriska la ah reer Hiiraan sidaasne Soomaaliweyn lagu raadiyo.
Arintaani waa mida ay taageerada badan kaka heleen waxgaradka Hiiraan iyadoona ay maalintii xildhibaanadu galaan 4 ilaa 5 shir waliba TFGda ayaa ka jiifto maahane hadii ay ka saacidii laheyd waxii ay u baahan yahiin gogol nabadeed ayey mar hore reer Hiiraan u fidin lahaayeen.
Sikastaba waxey u muuqataa in ay bulshada Hiiraan tusaale fiican u noqon doonaan Soomaaliweyn oo ay dhisan doonaan maamul ku yimaada rabitaanka iyo wadajirka reer Hiiraan iyo Soomaaliweyn iyadoona ay Hiiraan yeelaneyso mustaqbalka dhaw maamul adag oo xiriir wanagsan la leh dowlada kumeel gaarka maadama aysan reer Hiiraan aheyn umad ka go'eysa Soomaaliweyn marka la mideeyo kooxaha fikirka siyaasadeed ku kala duwan ee ay dhiseen qaar ka mid ah muwaadiniita ka soo jeeda Hiiraan.
Dhinaca kale xaalada guud ee magaalada Belet Weyne ayaa ah mid nabad ah halka dhaqdhaqaaq ciidan oo xoogan ka socdo magaalada Bulo Burde iyo nawaaxigeeda kuwaasi oo hada ku sugan meel aan magaalada ka fogeyn iyagoona magaalada dhawr jiho kaka beegan.
· admin on January 15 2012 12:29:01 · 0 Comments · 1976 Reads ·
14,612,653 unique visits